Hooyo reer Canada ah oo dib ula midawday wiilkeeda oo laga afduubtay 1987 - BBC News Somali
Hooyo reer Canada ah oo dib ula midawday wiilkeeda oo laga afduubtay 1987
Lyneth Mann-Lewis ka hadlaysay wiilkeeda ay dib u midoobeen
Hooyo reer Canada ah ayaa dib ula midawday wiilkeeda oo laga afduubtay 1987-dii isaga oo yar.
Shiinaha oo Muslimiinta dalkaasi ciqaab adag ku haya
"Erayo laguma cabiri karo sida aan dareemay," ayay tiri, "erayada ah wiilkaagii wuu nool yahay oo waan helnay neecaw ayay ahaayeen."
"Waxaan doonayay in aan arko in warka la ii sheegay uu run yahay, Alla Illaahayoow, waa wiil kaygii ayaan iri" ayay tiri.
Xigashada Sawirka, Courtesy Missing Children Society of Canada
Jermaine Allan Mann (bidix) markii uu yaraa iyo and Allan Mann
Baadigoobka ayaa sii socday, sheekada ku saabsan Jermaine iyo sawirkiisa oo loo qaabeeyay kolba da'da uu marayo ayaana la gayn jiray goobaha carruurta lagu xannaaneeyo, baareyaasha labada dalna baaritaanka kama aysan quusanin.
Gool dishay aabbihii carruurteeda
Waxaan makhraati u ahayn in qofina uusan quusanin maadaama oo 31 aan dhibaato soo maray, qof adag noqo, rumayso in wax walba dhici karaan," ayay tiri.